Ọgba ahụ bụ ahaziri. Ana m enweta otu blanket na mado. Ana m ehichapụ ọkwa ndị ahụ ozugbo. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịmụ onye m bụ, gịnị kpatara m ga-eji na-ege gị ntị?
Nke a bụ ozi-zuru oke zuru oke… M ga-atụle ya siri ike B +. Naanị obere ihe ọmụma na-efu bụ mkpọda nke m na-echeghị na ọtụtụ ndị fol ga-elebara anya ịnara - mana ọ ga-abụrịrị ezigbo mma ịnụ ihe kpatara ọ ga-eji dị ndị m mkpa. Okwu ole na ole dị na email dị ka